Iko kukosha kwesimbi isina kuvezwa chivezwa muveruzhinji hunyanzvi
Kubva pakuita kwekuvandudza, hunyanzvi hweveruzhinji hunogadzirwa nekuvandudzwa pahwaro hwekuenderera mberi kwekusimudzira kwenzanga yevanhu, hupfumi uye zvematongerwo enyika. Neshanduko yazvino magariro nharaunda netsika, chiyero cheunyanzvi hweruzhinji chakaitawo dzimwe shanduko. Kusvika padanho ...
Nderudzii rwekuvezwa kwemumaguta rwatinoda?
Sebasa rehunyanzvi munzvimbo dzeruzhinji dzemaguta, hukuru hukuru hwezvivezwa zvemumaguta chinhu chemaguta mamiriro, kuratidzwa kwakadzama kwetsika yemaguta kuravira, uye chiratidzo chakakosha chemweya weguta. Nekuenderera mberi kwekuvandudzwa kwekunzwisisa kwevanhu uye kudiwa kwetsika yemaguta nemabhawa ...
Mhando uye zvimiro zvekuvezwa
Chivezwa chinowanzo kuve chakakamurwa kuita maviri mafomu: zvivezwa uye zororo. 1. Chivezwa Icho chinonzi chiumbwa chakakomberedza chinoreva chivezwa chine mativi matatu chinogona kukosheswa munzira dzakawanda nemakona. Kune mamwe maitiro akasiyana siyana uye mafomu, anosanganisira echokwadi uye ekushongedza iwo, co ...